"ကုမ္ပဏီတစ်ခုထောင်ဖို့ဆိုတာ ငွေတွေအများကြီးရှိနေမှ ဖြစ်တာမဟုတ်ဘူး" လို့ ဆိုလာတဲ့ မစန္ဒီစိန်သိဏ်း - For her Myanmar
“ကုမ္ပဏီတစ်ခုထောင်ဖို့ဆိုတာ ငွေတွေအများကြီးရှိနေမှ ဖြစ်တာမဟုတ်ဘူး” လို့ ဆိုလာတဲ့ မစန္ဒီစိန်သိဏ်း
အတုယူ အားကျစရာကောင်းတဲ့ အမျိုးသမီးငယ်လေးပေါ့ ယောင်းတို့ရေ…
ကမ္ဘာကျော် Forbes ဆိုတဲ့ မဂ္ဂဇင်းက နှစ်စဉ်တိုင်း ကဏ္ဍအသီးသီးက အောင်မြင်သူတွေရဲ့စာရင်းကို ထုတ်ပြန်လေ့ရှိတာကို ယောင်းတို့ သိပြီးသား ဖြစ်မှာပါနော်.. အဲဒီ စာရင်းထဲ ပါဖို့ဆိုတာကလည်း လွယ်တာမှ မဟုတ်တာလေ… တကယ်ကို ထူးချွန်နေမှ၊ တကယ်ကို တော်မှ၊ တကယ်ကို လုပ်နိုင်စွမ်းရှိမှ ပါဖို့ ရာနှုန်းက နည်းနည်းလောက်ရှိတာရယ်… ဒါဆို စာရင်းထဲ ပါတဲ့သူတွေဆိုတာ ကျိန်းသေကို ထူးချွန်နေတဲ့သူမို့လို့ပေါ့… အက်ဒ်မင်တို့ နိုင်ငံမှာလည်း ဒီစာရင်းထဲ ပါခဲ့ဖူးသူတွေ ရှိပါတယ် ယောင်းတို့ရေ… ပြောကြမယ်ဆို ရှိတော့ရှိတယ်၊ ရှားတယ်ပေါ့နော်… အဲဒီလို လူတွေထဲကမှ အသက် သုံးဆယ်အောက်မှာ အောင်မြင်နေတဲ့ အာရှလူငယ် “30 under 30 Asia” ဆိုတဲ့စာရင်းထဲမှာ ပါဝင်ခဲ့ဖူးတဲ့ မစန္ဒီစိန်သိဏ်း နဲ့ ယောင်းတို့ကို မိတ်ဆက်ပေးပါရစေနော်…
Q .အစ်မ ရဲ့ အကြောင်းကို အရင်ဆုံး မျှဝေပေးပါဦးရှင်။
A . အစ်မ နာမည်က မ စန္ဒီစိန်သိဏ်း ဖြစ်ပါတယ်။ အစ်မက Digital Kaway ဆိုတဲ့ DiGital Marketing Agency ရဲ့ CEO ပါ။
Q . Digital Kaway ကိုဘယ်ခုနှစ်ကနေ စပြီးတည်ထောင်ဖြစ်ခဲ့တာလဲဆိုတာ သိပါရစေ။
A . အစ်မတို့ ဒီလုပ်ငန်းကို စခဲ့တာ ၂၀၁၅ လောက်ကတည်းကဆိုတော့ လေးနှစ်လောက်ရှိပါပြီ။
Q . ဘာကြောင့် Digital Marketing လုပ်ငန်းကို လုပ်ဖြစ်တာလဲဆိုတာပြောပြပေးပါဦး။
A . အစ်မ ရဲ့ အရင် Background ကလည်း Marketing Background က လာတာပါ ။ လုပ်ငန်းစတဲ့ ၂၀၁၅ နှစ်လောက်တုန်းကခန့်မှန်းကြည့်တယ်။ နောင်နှစ်တွေမှာ Digital Marketing က မြန်မာပြည်မှာ တွင်ကျယ်လာနိုင်တယ်ဆိုပြီး ဒီလုပ်ငန်းကိုရွေးဖြစ်တာပါ။
Q . ဘာလို့ Digital Kaway လို့နာမည်ပေးဖြစ်ခဲ့တာလဲ သိပါရစေ။
A . အစ်မ တို့ လုပ်ငန်းက ဝန်ဆောင်မှုတွေကို မှော်အစွမ်းနဲ့ ပေးလိုက်သလိုမျိုး ပေးမယ်ဆိုတဲ့ အဓိပ္ပာယ်နဲ့ စစချင်းက Digital Wizard ဆိုပြီး စပေးဖြစ်တယ်။ နောက်တော့ ဒီနာမည်က မြန်မာသိပ်မဆန်ဘူး။ အဲ့ဒါကြောင့် Digital Kaway (ဒစ်ဂျစ်တယ် ကဝေ) ဆိုပြီး ပေးဖြစ်တာပါ။
Related Article >>> အဆင်မပြေတာတွေ များလွန်းလို့ ကိုယ့်ကိုယ်ကိုယ် အဆုံးစီရင်ဖို့ ကြိုးစားပြီးမှ အောင်မြင်မှုကို ပြန်ပြီး ရှာတွေ့နိုင်ခဲ့တဲ့ မဧပရယ်လ်ခင်
Q. ဝန်ထမ်းဘဝကနေ ကိုယ်ပိုင်လုပ်ငန်းတည်ထောင်ဖြစ်ပုံကိုသိပါရစေ။
A . အရင်တုန်းကတော့ ကုမ္ပဏီတစ်ခုကို ဦးဆောင်မယ့် အမျိုးသမီးတစ်ဦးဖြစ်လာလိမ့်မယ်လို့ မမျှော်လင့်ခဲ့မိဘူး။
အဲ့ဒီလိုနဲ့ ၂၀၁၄ မှာ အစ်မ အဖွဲ့အစည်းတစ်ခုမှာ အလုပ်လုပ်ဖြစ်တယ်။ သူက အသေးစား အလတ်စား ကုမ္ပဏီလေးတွေကို မြေတောင်မြှောက်ပေးတဲ့ အဖွဲ့အစည်းမျိုးပေါ့။ အဲဒီမှာ လုပ်ရင်း ကုမ္ပဏီတစ်ခုထောင်ဖို့ဆိုတာ ငွေတွေအများကြီးရှိနေမှ ဖြစ်တာမဟုတ်ဘူးဆိုတာ သိသွားတာ။အဲဒီလိုနဲ့ စိတ်ကူးတစ်ခုရပြီး လုပ်ဖြစ်သွားတာပါ။
Q . 30 under 30 ကို ဆုကို ရတဲ့ အချိန်မှာ အစ်မအတွက် ဘာတွေ ပြောင်းလဲသွားလဲ။
A . ဆုမရခင်ရော၊ ဆုရပြီးတော့ရော အလုပ်တွေက လုပ်နေရတာပါပဲ။ (ရယ်လျက်) ဒါပေမဲ့ ကိုယ့်ကို လူတွေပိုအသိအမှတ်ပြုလာကြတယ်။ ကိုယ့်အတွက်လည်း တာဝန်ပိုကြီးလာတယ်။ ကိုယ့်ကိုအထင်ကြီးလို့ ပေးထားတာဆိုတော့ ဒီထက်ပိုပြီး လုပ်နိုင်စွမ်းနည်းမသွားဖို့ ပိုကြိုးစားရတယ်။ အကောင်းဆုံးအချက်ကတော့ အစ်မ အလုပ်ပိုကြိုးစားဖို့အတွက် တွန်းအားပိုဖြစ်စေတယ်။
Q . Digital Kaway အပြင်နောက်ထပ် ဘယ်လိုအဖွဲ့အစည်းတွေမှာ ဦးဆောင်ဖြစ်သေးလဲ။
A . အစ်မက Geek Girl Myanmar ဆိုတဲ့ မြန်မာအမျိုးသမီးနည်းပညာရှင်များ အဖွဲ့ကိုလည်း စတင် တည်ထောင်ထားပါတယ်။ အဲ့ဒီအဖွဲ့မှာ အမျိုးသမီးဦးဆောင်သူတွေ၊ ဦးဆောင်သူဖြစ်ဖို့ ကြိုးစားနေတဲ့ အမျိုးသမီးလေးတွေရှိတယ်။ သူတို့အတွက် အစ်မတို့က Workshop တွေ၊ Training တွေ လုပ်ပေးတာမျိုးရှိပါတယ်။ နောက် နယ်က အမျိုးသမီးတွေအတွက် ဒစ်ဂျစ်တယ်နည်းပညာကို သင်ကြားပေးတာမျိုးရှိပါတယ်။
Q . အသက်ငယ်ငယ်နဲ့ ဦးဆောင်သူတစ်ယောက် ဖြစ်လာရတာရော၊ နောက်ပြီး အမျိုးသမီးတစ်ယောက်ဖြစ်နေတဲ့အတွက်ရော ကြုံရတဲ့ စိန်ခေါ်မှုတွေရှိရင်ပြောပြပါဦး။
A . အဓိကက အသက်ငယ်တဲ့အတွက်ပေါ့နော်။ လုပ်ငန်းစလုပ်တဲ့အခါတုန်းက ကြုံခဲ့ရတာတွေရှိတယ်။ လုပ်ငန်းကိစ္စဆွေးနွေးဖို့ သွားတဲ့အခါ နင့် မှာ Boss ပါလာလား လို့ မေးကြတာရှိတယ်။ နောက် ဝန်ထမ်းခေါ်တဲ့ အတွေ့အကြုံရှိတဲ့ သူတွေကို အလုပ်ခန့်ချင်တဲ့အခါ ပြဿနာနည်းနည်းရှိတယ်။ အသက်ငယ်ငယ် အမျိုးသမီးတစ်ယောက်ဆီမှာ အလုပ်ဝင်ဖို့ဆိုရင် သူတို့က စဉ်းစားကြတာတွေရှိတယ်။ အခုတော့ ဒါမျိုးတွေ သိပ်မကြုံရတော့ပါဘူး။
Q . ကိုယ်လုပ်တဲ့ အလုပ်တစ်ခုကို Passion ရှိဖို့ ဘယ်လောက်အထိအရေးကြီးလဲ။ မရှိရင်ရော ဘယ်လိုလုပ်ယူရမလဲ
A . Passion ရှိဖို့ (ကိုယ့်အလုပ်ကိုချစ်ဖို့) က တကယ်အရေးကြီးပါတယ်။ အလုပ်လုပ်တယ်ဆိုတာ နေ့စဉ်နဲ့အမျှ ဒီအလုပ်အတွက်ကို ကိုယ့်အချိန်တွေကို ပေးထားရတယ်။ မနက်ဆို စောစောထ အလုပ်ကို သွားရတယ်။ ညဆို နောက်ကျမှ ပြန်လာရတယ်။ ဒီလို တစ်နေ့လုံး ကိုယ့်အချိန်တွေကို နေ့စဉ်ပေးနိုင်ဖို့ဆိုတာ အလုပ်ကို ချစ်တဲ့ Passion မရှိဘဲ လုံးဝမဖြစ်နိုင်ဘူး။ နောက်ပြီး အစ်မထင်တာက Passion ဆိုတာ လုပ်ယူလို့မရဘူး ဒါပေမဲ့ Motivation လုပ်လို့တော့ရမယ်။ ကိုယ့်အလုပ်နဲ့ ပတ်သက်တဲ့ ရည်မှန်းချက်တွေချမယ်။ အဲဒီရည်မှန်းချက်တွေအတိုင်း ဖြစ်လာအောင်လုပ်မယ် ဆိုရင် ဖြစ်လာမှာပါ။
Related Article >>> မြန်မာ့ရိုးရာအစားအသောက်တွေကို အရည်အသွေးမီ၊ စိတ်ချရတဲ့ စားသောက်ကုန် ဖြစ်စေချင်တာမို့ Tree Food ကို လုပ်ဖြစ်ခဲ့တာပါလို့ ဆိုလာတဲ့ မချိုလဲ့အောင်
Q . အလုပ်နဲ့ ဘဝ ညီမျှဖို့ ဘယ်လောက်အထိအရေးကြီးလဲ
A . အလုပ် နဲ့ ဘဝ နဲ့ အချိန်က ညီမျှမှာ မဟုတ်ဘူးလို့တော့ ထင်တယ်။ အစ်မ ဘဝမှာဆိုလည်း အလုပ်က ရာခိုင်နှုန်း တော်တော်များများနေရာယူထားတယ်။
အစ်မအမြင်က လူတစ်ယောက်ဟာ အောင်မြင်ချင်ရင် အလုပ်က ငါးဆယ် ရာနှုန်း၊ ဘဝက ငါးဆယ်ရာနှုန်း အချိန်ပေးနေလို့မရဘူးလို့မြင်တယ်။ အလုပ်ကို ၁၀၀ ရာခိုင်နှုန်းထားလို့လည်း မဖြစ်ပြန်ဘူး ဒီတော့ ၇၀ ၈၀ ရာခိုင်နှုန်းလောက်တော့ ပေးသင့်ပါတယ်။
Q . လူငယ်တွေက ကိုယ့်အနာဂတ်အတွက် ဘယ်လိုပြင်ဆင်ထားသင့်တယ်ထင်လဲ?
A . ဘာဖြစ်လာမယ်ဆိုတာ မသိတဲ့အတွက် အများကြီးပြင်ဆင်ထားလို့တော့မရပါဘူး။ ကောင်းတာကတော့ စည်းကမ်းတကျလေး အလုပ်လုပ်စေချင်တယ်။ ငါ ဒီအချိန်ဆို ဒါလေးပြီးအောင်လုပ်မယ်။ ဒီနေ့ ဒါလေးပြီးအောင်လုပ်မယ်ဆိုတဲ့ စိတ်လေးနဲ့ လုပ်စေချင်တယ်။
နောက်ပြီး နေ့စဉ်တိုင်း စွမ်းအင် ရာခိုင်နှုန်းပြည့်ထည့် အလုပ်လုပ်စေချင်တယ်။ ဒါဆိုရင် နောက်နေ့တွေမှာ ရလာမယ့် အခွင့်အရေးတွေအတွက် အဆင်သင့်ဖြစ်နေမှာပါ။
Q . ကိုယ်ပိုင်အလုပ်ကို ဦးစီးဦးဆောင်လုပ်ချင်တဲ့ အမျိုးသမီးလေးတွေအတွက် အားပေးစကား။
A . လုပ်ငန်းရှင်ဆိုတဲ့ စကားက ကြားလို့သာကောင်းတာပါ။ တာဝန်ကလည်း များပါတယ်။ ပြဿနာလည်း များပါတယ်။ (ရယ်လျက်) အမျိုးသမီး၊ အမျိုးသားပဲဖြစ်ဖြစ် လုပ်ငန်းရှင်ဖြစ်ချင်တယ်ဆိုရင် သူတို့ဆီမှာ ခံနိုင်ရည်ရှိလားလို့ အစ်မက မေးချင်တယ်။ ငွေကြေးပြတ်လပ်တာကိုလည်း ခံနိုင်ရည်ရှိရမယ်။ ပြဿနာတွေကိုလည်း ခံနိုင်ရည်ရှိရမယ်။ ကိုယ်က ဒီလို စိန်ခေါ်မှုတွေထက် ဘဝကို အေးအေးဆေးဆေးပဲ ဖြတ်သန်းချင်တယ်ဆိုရင်တော့ လုပ်ငန်းရှင်ဖြစ်ဖို့ထက် လုပ်ငန်းခွင်တစ်ခုမှာ အောင်မြင်သူဖြစ်ဖို့ ကြိုးစားသင့်တယ်လို့ မြင်ပါတယ်။
ဒါကတော့ မစန္ဒီ စိန်သိန်းရဲ့ အတွေ့အကြုံတွေကို မျှဝေပေးခဲ့တာပါ ယောင်းတို့ရေ… ဒီဆောင်းပါးလေးကို ဖတ်ရင်း ကြိုးစားချင်စိတ်တွေ ဖြစ်လာမယ်ဆိုရင်ပဲ အက်ဒ်မင်တို့ မေးရ၊ ဖြေရကျိုး၊ တင်ဆက်ပေးရကျိုး နပ်ပါပြီနော်…
အောင်မြင်ထူးချွန်တဲ့ အမျိုးသမီးငယ်လေးတွေ ဖြစ်လာကြပါစေလို့…
အတုယူ အားကစြရာကောငျးတဲ့ အမြိုးသမီးငယျလေးပေါ့ ယောငျးတို့ရေ…
ကမ်ဘာကြျော Forbes ဆိုတဲ့ မဂ်ဂဇငျးက နှဈစဉျတိုငျး ကဏ်ဍအသီးသီးက အောငျမွငျသူတှရေဲ့စာရငျးကို ထုတျပွနျလရှေိ့တာကို ယောငျးတို့ သိပွီးသား ဖွဈမှာပါနျော.. အဲဒီ စာရငျးထဲ ပါဖို့ဆိုတာကလညျး လှယျတာမှ မဟုတျတာလေ… တကယျကို ထူးခြှနျနမှေ၊ တကယျကို တျောမှ၊ တကယျကို လုပျနိုငျစှမျးရှိမှ ပါဖို့ ရာနှုနျးက နညျးနညျးလောကျရှိတာရယျ… ဒါဆို စာရငျးထဲ ပါတဲ့သူတှဆေိုတာ ကြိနျးသကေို ထူးခြှနျနတေဲ့သူမို့လို့ပေါ့… အကျဒျမငျတို့ နိုငျငံမှာလညျး ဒီစာရငျးထဲ ပါခဲ့ဖူးသူတှေ ရှိပါတယျ ယောငျးတို့ရေ… ပွောကွမယျဆို ရှိတော့ရှိတယျ၊ ရှားတယျပေါ့နျော… အဲဒီလို လူတှထေဲကမှ အသကျ သုံးဆယျအောကျမှာ အောငျမွငျနတေဲ့ အာရှလူငယျ “30 under 30 Asia” ဆိုတဲ့စာရငျးထဲမှာ ပါဝငျခဲ့ဖူးတဲ့ မစန်ဒီစိနျသိဏျး နဲ့ ယောငျးတို့ကို မိတျဆကျပေးပါရစနေျော…
Q .အဈမ ရဲ့ အကွောငျးကို အရငျဆုံး မြှဝပေေးပါဦးရှငျ။
A . အဈမ နာမညျက မ စန်ဒီစိနျသိဏျး ဖွဈပါတယျ။ အဈမက Digital Kaway ဆိုတဲ့ DiGital Marketing Agency ရဲ့ CEO ပါ။
Q . Digital Kaway ကိုဘယျခုနှဈကနေ စပွီးတညျထောငျဖွဈခဲ့တာလဲဆိုတာ သိပါရစေ။
A . အဈမတို့ ဒီလုပျငနျးကို စခဲ့တာ ၂၀၁၅ လောကျကတညျးကဆိုတော့ လေးနှဈလောကျရှိပါပွီ။
Q . ဘာကွောငျ့ Digital Marketing လုပျငနျးကို လုပျဖွဈတာလဲဆိုတာပွောပွပေးပါဦး။
A . အဈမ ရဲ့ အရငျ Background ကလညျး Marketing Background က လာတာပါ ။ လုပျငနျးစတဲ့ ၂၀၁၅ နှဈလောကျတုနျးကခနျ့မှနျးကွညျ့တယျ။ နောငျနှဈတှမှော Digital Marketing က မွနျမာပွညျမှာ တှငျကယျြလာနိုငျတယျဆိုပွီး ဒီလုပျငနျးကိုရှေးဖွဈတာပါ။
Q . ဘာလို့ Digital Kaway လို့နာမညျပေးဖွဈခဲ့တာလဲ သိပါရစေ။
A . အဈမ တို့ လုပျငနျးက ဝနျဆောငျမှုတှကေို မှျောအစှမျးနဲ့ ပေးလိုကျသလိုမြိုး ပေးမယျဆိုတဲ့ အဓိပ်ပာယျနဲ့ စစခငျြးက Digital Wizard ဆိုပွီး စပေးဖွဈတယျ။ နောကျတော့ ဒီနာမညျက မွနျမာသိပျမဆနျဘူး။ အဲ့ဒါကွောငျ့ Digital Kaway (ဒဈဂဈြတယျ ကဝေ) ဆိုပွီး ပေးဖွဈတာပါ။
Related Article >>> အဆငျမပွတောတှေ မြားလှနျးလို့ ကိုယျ့ကိုယျကိုယျ အဆုံးစီရငျဖို့ ကွိုးစားပွီးမှ အောငျမွငျမှုကို ပွနျပွီး ရှာတှနေို့ငျခဲ့တဲ့ မဧပရယျလျခငျ
Q. ဝနျထမျးဘဝကနေ ကိုယျပိုငျလုပျငနျးတညျထောငျဖွဈပုံကိုသိပါရစေ။
A . အရငျတုနျးကတော့ ကုမ်ပဏီတဈခုကို ဦးဆောငျမယျ့ အမြိုးသမီးတဈဦးဖွဈလာလိမျ့မယျလို့ မမြှျောလငျ့ခဲ့မိဘူး။
အဲ့ဒီလိုနဲ့ ၂၀၁၄ မှာ အဈမ အဖှဲ့အစညျးတဈခုမှာ အလုပျလုပျဖွဈတယျ။ သူက အသေးစား အလတျစား ကုမ်ပဏီလေးတှကေို မွတေောငျမွှောကျပေးတဲ့ အဖှဲ့အစညျးမြိုးပေါ့။ အဲဒီမှာ လုပျရငျး ကုမ်ပဏီတဈခုထောငျဖို့ဆိုတာ ငှတှေအေမြားကွီးရှိနမှေ ဖွဈတာမဟုတျဘူးဆိုတာ သိသှားတာ။အဲဒီလိုနဲ့ စိတျကူးတဈခုရပွီး လုပျဖွဈသှားတာပါ။
Q . 30 under 30 ကို ဆုကို ရတဲ့ အခြိနျမှာ အဈမအတှကျ ဘာတှေ ပွောငျးလဲသှားလဲ။
A . ဆုမရခငျရော၊ ဆုရပွီးတော့ရော အလုပျတှကေ လုပျနရေတာပါပဲ။ (ရယျလကျြ) ဒါပမေဲ့ ကိုယျ့ကို လူတှပေိုအသိအမှတျပွုလာကွတယျ။ ကိုယျ့အတှကျလညျး တာဝနျပိုကွီးလာတယျ။ ကိုယျ့ကိုအထငျကွီးလို့ ပေးထားတာဆိုတော့ ဒီထကျပိုပွီး လုပျနိုငျစှမျးနညျးမသှားဖို့ ပိုကွိုးစားရတယျ။ အကောငျးဆုံးအခကျြကတော့ အဈမ အလုပျပိုကွိုးစားဖို့အတှကျ တှနျးအားပိုဖွဈစတေယျ။
Q . Digital Kaway အပွငျနောကျထပျ ဘယျလိုအဖှဲ့အစညျးတှမှော ဦးဆောငျဖွဈသေးလဲ။
A . အဈမက Geek Girl Myanmar ဆိုတဲ့ မွနျမာအမြိုးသမီးနညျးပညာရှငျမြား အဖှဲ့ကိုလညျး စတငျ တညျထောငျထားပါတယျ။ အဲ့ဒီအဖှဲ့မှာ အမြိုးသမီးဦးဆောငျသူတှေ၊ ဦးဆောငျသူဖွဈဖို့ ကွိုးစားနတေဲ့ အမြိုးသမီးလေးတှရှေိတယျ။ သူတို့အတှကျ အဈမတို့က Workshop တှေ၊ Training တှေ လုပျပေးတာမြိုးရှိပါတယျ။ နောကျ နယျက အမြိုးသမီးတှအေတှကျ ဒဈဂဈြတယျနညျးပညာကို သငျကွားပေးတာမြိုးရှိပါတယျ။
Q . အသကျငယျငယျနဲ့ ဦးဆောငျသူတဈယောကျ ဖွဈလာရတာရော၊ နောကျပွီး အမြိုးသမီးတဈယောကျဖွဈနတေဲ့အတှကျရော ကွုံရတဲ့ စိနျချေါမှုတှရှေိရငျပွောပွပါဦး။
A . အဓိကက အသကျငယျတဲ့အတှကျပေါ့နျော။ လုပျငနျးစလုပျတဲ့အခါတုနျးက ကွုံခဲ့ရတာတှရှေိတယျ။ လုပျငနျးကိစ်စဆှေးနှေးဖို့ သှားတဲ့အခါ နငျ့ မှာ Boss ပါလာလား လို့ မေးကွတာရှိတယျ။ နောကျ ဝနျထမျးချေါတဲ့ အတှအေ့ကွုံရှိတဲ့ သူတှကေို အလုပျခနျ့ခငျြတဲ့အခါ ပွဿနာနညျးနညျးရှိတယျ။ အသကျငယျငယျ အမြိုးသမီးတဈယောကျဆီမှာ အလုပျဝငျဖို့ဆိုရငျ သူတို့က စဉျးစားကွတာတှရှေိတယျ။ အခုတော့ ဒါမြိုးတှေ သိပျမကွုံရတော့ပါဘူး။
Q . ကိုယျလုပျတဲ့ အလုပျတဈခုကို Passion ရှိဖို့ ဘယျလောကျအထိအရေးကွီးလဲ။ မရှိရငျရော ဘယျလိုလုပျယူရမလဲ
A . Passion ရှိဖို့ (ကိုယျ့အလုပျကိုခဈြဖို့) က တကယျအရေးကွီးပါတယျ။ အလုပျလုပျတယျဆိုတာ နစေ့ဉျနဲ့အမြှ ဒီအလုပျအတှကျကို ကိုယျ့အခြိနျတှကေို ပေးထားရတယျ။ မနကျဆို စောစောထ အလုပျကို သှားရတယျ။ ညဆို နောကျကမြှ ပွနျလာရတယျ။ ဒီလို တဈနလေုံ့း ကိုယျ့အခြိနျတှကေို နစေ့ဉျပေးနိုငျဖို့ဆိုတာ အလုပျကို ခဈြတဲ့ Passion မရှိဘဲ လုံးဝမဖွဈနိုငျဘူး။ နောကျပွီး အဈမထငျတာက Passion ဆိုတာ လုပျယူလို့မရဘူး ဒါပမေဲ့ Motivation လုပျလို့တော့ရမယျ။ ကိုယျ့အလုပျနဲ့ ပတျသကျတဲ့ ရညျမှနျးခကျြတှခေမြယျ။ အဲဒီရညျမှနျးခကျြတှအေတိုငျး ဖွဈလာအောငျလုပျမယျ ဆိုရငျ ဖွဈလာမှာပါ။
Related Article >>> မွနျမာ့ရိုးရာအစားအသောကျတှကေို အရညျအသှေးမီ၊ စိတျခရြတဲ့ စားသောကျကုနျ ဖွဈစခေငျြတာမို့ Tree Food ကို လုပျဖွဈခဲ့တာပါလို့ ဆိုလာတဲ့ မခြိုလဲ့အောငျ
Q . အလုပျနဲ့ ဘဝ ညီမြှဖို့ ဘယျလောကျအထိအရေးကွီးလဲ
A . အလုပျ နဲ့ ဘဝ နဲ့ အခြိနျက ညီမြှမှာ မဟုတျဘူးလို့တော့ ထငျတယျ။ အဈမ ဘဝမှာဆိုလညျး အလုပျက ရာခိုငျနှုနျး တျောတျောမြားမြားနရောယူထားတယျ။
အဈမအမွငျက လူတဈယောကျဟာ အောငျမွငျခငျြရငျ အလုပျက ငါးဆယျ ရာနှုနျး၊ ဘဝက ငါးဆယျရာနှုနျး အခြိနျပေးနလေို့မရဘူးလို့မွငျတယျ။ အလုပျကို ၁၀၀ ရာခိုငျနှုနျးထားလို့လညျး မဖွဈပွနျဘူး ဒီတော့ ၇၀ ၈၀ ရာခိုငျနှုနျးလောကျတော့ ပေးသငျ့ပါတယျ။
Q . လူငယျတှကေ ကိုယျ့အနာဂတျအတှကျ ဘယျလိုပွငျဆငျထားသငျ့တယျထငျလဲ?
A . ဘာဖွဈလာမယျဆိုတာ မသိတဲ့အတှကျ အမြားကွီးပွငျဆငျထားလို့တော့မရပါဘူး။ ကောငျးတာကတော့ စညျးကမျးတကလြေး အလုပျလုပျစခေငျြတယျ။ ငါ ဒီအခြိနျဆို ဒါလေးပွီးအောငျလုပျမယျ။ ဒီနေ့ ဒါလေးပွီးအောငျလုပျမယျဆိုတဲ့ စိတျလေးနဲ့ လုပျစခေငျြတယျ။
နောကျပွီး နစေ့ဉျတိုငျး စှမျးအငျ ရာခိုငျနှုနျးပွညျ့ထညျ့ အလုပျလုပျစခေငျြတယျ။ ဒါဆိုရငျ နောကျနတှေ့မှော ရလာမယျ့ အခှငျ့အရေးတှအေတှကျ အဆငျသငျ့ဖွဈနမှောပါ။
Q . ကိုယျပိုငျအလုပျကို ဦးစီးဦးဆောငျလုပျခငျြတဲ့ အမြိုးသမီးလေးတှအေတှကျ အားပေးစကား။
A . လုပျငနျးရှငျဆိုတဲ့ စကားက ကွားလို့သာကောငျးတာပါ။ တာဝနျကလညျး မြားပါတယျ။ ပွဿနာလညျး မြားပါတယျ။ (ရယျလကျြ) အမြိုးသမီး၊ အမြိုးသားပဲဖွဈဖွဈ လုပျငနျးရှငျဖွဈခငျြတယျဆိုရငျ သူတို့ဆီမှာ ခံနိုငျရညျရှိလားလို့ အဈမက မေးခငျြတယျ။ ငှကွေေးပွတျလပျတာကိုလညျး ခံနိုငျရညျရှိရမယျ။ ပွဿနာတှကေိုလညျး ခံနိုငျရညျရှိရမယျ။ ကိုယျက ဒီလို စိနျချေါမှုတှထေကျ ဘဝကို အေးအေးဆေးဆေးပဲ ဖွတျသနျးခငျြတယျဆိုရငျတော့ လုပျငနျးရှငျဖွဈဖို့ထကျ လုပျငနျးခှငျတဈခုမှာ အောငျမွငျသူဖွဈဖို့ ကွိုးစားသငျ့တယျလို့ မွငျပါတယျ။
ဒါကတော့ မစန်ဒီ စိနျသိနျးရဲ့ အတှအေ့ကွုံတှကေို မြှဝပေေးခဲ့တာပါ ယောငျးတို့ရေ… ဒီဆောငျးပါးလေးကို ဖတျရငျး ကွိုးစားခငျြစိတျတှေ ဖွဈလာမယျဆိုရငျပဲ အကျဒျမငျတို့ မေးရ၊ ဖွရေကြိုး၊ တငျဆကျပေးရကြိုး နပျပါပွီနျော…
အောငျမွငျထူးခြှနျတဲ့ အမြိုးသမီးငယျလေးတှေ ဖွဈလာကွပါစလေို့…
Tags: CEO, Forbes, Interview, Sandi Sein Thein, startup, success
Wathun January 30, 2019